समाचार खोज्दै गाउँतिर | eAdarsha.com
समाचार खोज्दै गाउँतिर
फेरि हिउँद लागेको छ, पोहोर यही हिउँदमा पोखराको पत्रकरिताबाट बिदा भएर गाउँ फर्केको थिएँ । यो एक वर्ष मेरा लागि चुनौतीपूर्ण थियो ।करिब पच्चिस वर्षको शहरिया पत्रकारिताले मलाइ कतै गाउँमा बसेर पत्रकारिता गर्ने वातावरण नबनाउने त होइन ? गाउँमा टिक्न सक्छु कि सक्दिन ? मेरो मनमा यी भावनाहरु राम्रैसँग खेलेका थिए ।
गाउँ फर्कंदा गाउँ शून्य थियो । कताकति घरमा बुढा बा आमाले घर कुर्दै थिए । आँखाभरि आँसु लिएर छोराछोरी विदेशीएका कथा गाउँ फर्किने बित्तिकै मैले धेरै बुढा बाआमाबाट सुनें । म आफ्नै घर पुग्दा पनि पच्चिस वर्ष एक्लै बसेकी आमाले छोरो आउने बाटो कुरेको आमाका आँखामा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
हो मलाइ थाहा थियो, मेरी आमाले यी पच्चिस वर्ष धेरै अँसु पिएर बिताउनु भएको थियो । एक्लै बस्दा आमाको मन बिस्तारै यस्तै रैछ भनेर करिब ढुंगो भएको थियो, मैले यो प्रष्ट अनुभव गर्न सक्थे आमाका आँखामा । यही अवधिमा कमरेडहरुको उन्मादले मेरी आमाको सिन्दुर खोसेको थियो । सपना त आमाले पनि देख्नु भएको थियो होला तर मेरी आमाको सपना मेरो बाबाको जघन्य हत्याले चटक्क चुँडिएको थियो ।
एकातिर सिन्दुर खोसिएको विभत्स घाउ र अर्कोतिर छोरो गाउँ नफर्कंदा संसारमा आफ्नो भन्ने कोही रैनछ भन्ने पीडामा मेरी आमा भित्र रोएर बाहिर हाँसेको मैले गाउँ फर्केपछि अनुभूति गरें ।
मेरी आमा मात्र होइन गाउँमा धेरै आमा हरुका आफ्नै पीडाका कथा थिए । छोराछोरीले अवसरको खोजीमा भन्दै गाउँ छाडेपछि घरमा लत्रेरै भएपनि छाक टार्न अँगेनो बाल्ने आमाहरु, खलाँती झैं सास फेर्दै एकछाकको जोहो गर्ने बाहरुका धेरै व्यथाहरु मैले गाउँमा महसुस गरें ।
मैले शहरमा पत्रकारिता गर्दा पनि समुदायको आवाजलाई सञ्चार माध्यमसम्म पुर्याउने अभ्यास गरेको मात्र थिइन मेरो पत्रकारिता जनकेन्द्रित बनाउने प्रयास गरे । तर शहर र गाउँको पत्रकारिता फरक थियो । म जुन भूगोलमा फर्केको थिएँ त्यहाँ समाचारका धेरै पोकाहरु थिए । मैले ती पोकालाई फुकाउनु थियो । शहरमा जस्तो हरेक दिन गाउँमा न पत्रकार सम्मेलन हुन्थे न कुनै होटल र रेष्टुरेन्टहरुमा समाचार भेटिन्थे । ग्रामीण क्षेत्रमा मैले गर्ने पत्रकारिता औपचारिक हुने कुरै भएन, न म सुकिलो भएर समाचार खोज्न जानुपर्ने भयो । टालेको जाँगे र थोत्रै सर्ट भिरेर पनि मैले गाउँमा समुदायका समाचार संकलन गर्न सक्ने भएँ । न कुनै सवारी साधन चाहिने भुटेका मकै टोक्दै गाउँतिर समाचार संकलनमा अभ्यस्त भैसकेको छु ।
हुन त मैले छापा, रेडियो, टेलीभिजन, अनलाइन सबै क्षेत्रको अनुभव संगालेको छु । सबै क्षेत्रमा सम्पादक, कार्यकारी सम्पादक, संवाददाता क्यामेरा पर्सनसमेत भएर काम गरेको अनुभव छ । तर यतिवेला अलिबढी रेडियोमा समाचार पठाउन व्यस्त छु किनकि समुदायले धेरै रेडियोको समाचार सुन्छ ।
हिउँदको शुरुवात बारीमा कोदालो बोकेर तरकारी लगाउने तयारी गर्दै थिए रिडी बजारबाट पत्रकार भाइ चिरञ्जीवीको फोन आउँछ । दाइ रिडी रुद्रवेणी सडक अवरुद्ध भयो कति दिन खुल्दैन थाहा छैन । हामी युवाहरुले नयाट्रयाकबाट वाइपास बनाउँदै छौं हजुरले लेखेको समाचारले प्रभाव पार्छ दाइ समाचार लेख्नु पर्यो आग्रह गर्छन् । हत्तपत्त बारीबाट धुस्रैमुस्रै घरमा आउँछु ल्यापटपमा समाचार लेख्छु घरदेखि अलिपर भाइ घनश्याम ज्ञवालीको घरमा पुगेर नेटबाट समाचार स्थानीय एफएममा पठाउँछु । मलाइ थाहा छ केहीबेरमा स्थानीय एफएमबाट त्यो समाचार बज्नेछ ।
समाचार पठाएर आउँदा आमाले एकघान मकै र पिपलमुनी कान्छो बुवाकोमा पारेको मागेको एक गिलास मोही खाजा दिनुहुन्छ । एकपटक आमालाई हेर्छु सत्तरी वर्षकी आमा छोरो गाउँ फर्केपछि अलि खुसी हुनुहुन्छ । आमाले दिएको मकै र मोही शहर बस्दा पत्रकार सम्मेलनहरुका खाजा भन्दा सय गुणा स्वादिष्ठ छ ।
गाउँको पत्रकारितामा हरेक पटक लेखिएका समाचारमा अपनत्व भल्किन्छ । समाचार लेखेपछि तीनदेखि चारपटक समाचार दोहोर्याउँछु मैले लेखेको समाचारले आम जनसमुदायको मन नदुखोस् मेरो चहना हुन्छ । मेरो समाचार आजभोलि कुनै नेता र मन्त्रीका अघिपछि लाग्दैन नत मलाई प्रमुख अतिथि के बोल्छ भनेर दिनभर कुर्नु पर्छ । मेरो समाचारमा त आजभोलि उन्मादी बन्दुकले मारिएका भोजराज ज्ञवालीका परिवारको व्यथा बोल्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट पालिने बाआमाका कथा बोल्छ, छोराछोरी विदेशीएपछि गाउँ कुरेका बुढा बा आमाका दुखेसा मेरा समाचारका विषयवस्तु बन्छन् । गाउँघरमा किसानहरुले मल बीउसँगै उत्पादन गरेर पनि मूल्य नपाएका विवशता मेरो समाचार बन्छन् । बाटाले भत्काएका बस्तीहरु, घरहरुसंगै बाटो खन्दा खेत पुरिएका दृष्टीविहीन मुमेश्वर र भीमप्रसाद ज्ञवालीका पीडासँगै राज्यसँगको आक्रोश मेरा समाचार बन्छन् । वैदेशीक रोजगारीबाट फर्केर गाउँमा बेरोजगार बनेका सन्तोष विकहरुका कहानी समाचारका शीर्षक बन्छन् । रित्ता गाउँहरु र रित्ता घर, बाँझिएका बारीहरु मेरा समाचार हुन् । अधिकार खोसिएका र आवाजविहीनहरुका आवाज मेरो पत्रकारिताको अभिष्ट हो ।
मैले भोका मान्छेहरुलाइ पेटभरि खुवाएर मात्र भोको रहनुको कारणको समाचार लेख्ने गर्छु । मलाइ सस्तो लोकप्रियताका लागि तथानाम समाचार लेख्नु पनि छैन ।
हो मेरा धेरै समकक्षीहरु ठूलै सन्चार उधमी बनेका छन् । आफ्नै सञ्चार माध्यम पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन, युट्युव च्यानलहरु छन् । पत्रकार सम्मेलनमा आउँदा पनि कार चढेर आउने रवाफिला गफ गर्ने साथीहरु पनि धेरै भेटेको छु । केही ठूला मिडियाहरुमा क्यामेरा बोकेर धेरै रात भोकै समाचार लेखेर रात बिताएका दृष्टान्तहरु धेरै छन् र तिनै सञ्चार माध्यमका ठूलावडाहरु श्रमजिवी पत्रकार ऐनका गफ हांकेर भोको पेटका पत्रकारहरुको धज्जी उडाउनेको फेहरिस्त पनि समयमा प्रस्तुत गर्ने छु ।
यतिबेला मेरो पत्रकारिता गाउँ केन्द्रित छ । गज्जवको कुरा त मोवाइल बिग्रेपछि किन्न पनि सकेको छैन । आमाको पुरानो मोवाइलले काम चलाएकाले फेसबुक र मेसेन्जरका धेरै साथीहरुसँग सम्पर्क छैन । क्यामेरा त परको कुरा, एउटा थोत्रो ल्यापटप छ । साथीहरुले एन्टिभाइरस हालिदिनु भएकाले राम्रै चलेको छ, यही ल्यापटपको भर छ । घरबाट अलि पर एकजना भाइले नेट चलाउँछन त्यहीबाट समाचार पठाउँछु तापनि मलाई निकै आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ ।
गाउँबाट समाचार लेख्ने भएर होला पत्रकारका संघसस्थाको नजरमा म पर्दिन । न कसैले सोधखोज गर्छ । हुनत म नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य हुं तर कहिल्यै पत्रकारले पाउने सुविधा प्रोत्साहन पुरस्कार भित्र म पर्दिन । आज म नितान्त गाउँले पत्रकारितामा एकोहारो भै सकेको छु । स्थानीय एफएम स्टेशनहरुमा दिनदिनै मेरा समाचार बज्छन् । रेडियोका पत्रकार भाइहरुले एकदिन समाचार नपठाए दाइ समाचार आएन भनेर सम्झाउनु हुन्छ । गाउँका बुढा बाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबै समुदायले आजभोलि मेरा समाचार खोज्छन् । यो मात्र होइन आज मेरी स७० वर्षे आमालाई छोराको नाम रेडियोमा आउने भएपछि समाचार सुन्ने बानी परेको छ । गाउँमा आजभोलि सबैका घरमा रेडिया झुण्डिएका छन् । मैले पठाएका समाचार नामसहित बजेन भने बाबु आज समाचार आएननि भनेर घरमै आएर सोध्छन् गाउँलेहरु । त्यही वाक्य सुनेपछि मलाई आनन्द लाग्छ । गाउँमा बसेर आटो, रोटो र मकैका ठेला टोक्दै गाउँले पत्रकारितामा रमाउन थालेको छु । यसैले म अहिले समाचार खोज्दै गाउँतिर रमाइरहेको छु ।
(कृष्ण अन्जान ज्ञवाली गुल्मी ग्रामीण क्षेत्र कार्यरत पत्रकार हुन् ।)
सतिश खराल, कार्तिक ६, २०७७
प्रा.डा. कृष्ण के.सी., कार्तिक ५, २०७७
परजीवी अर्थ राजनीति
प्रा. विश्वराज अधिकारी, कार्तिक २, २०७७
वडा दसैँको महिमा सङ्क्षिप्त विश्लेषण
शिवप्रसाद गौतम, कार्तिक १, २०७७
भ्रष्ट्राचारमा श्रीमतीहरुको हात
आदर्श समाज सम्वाददाता, असाेज २६, २०७७
समयको कहानी : बानियाँकी महारानी